SomaliTalk.com » Wasiirka Difaaca oo kormeer howlleed ku tagey Xarunta Ciidamadda Badda Soomaaliya.
Muqdisho, ..Wasiirka Difaaca Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini, oo weheliyo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Difaaca Mudane Cabdalla Xuseen Cali, ayaa maanta kormeer howlleed ku tagey xarunta Ciidamadda Badda Soomaaliya, taas oo ku taala Dekaddii hore ee Muqdisho, isagoona kormeray qalabka iyo xarumaha ay ku shaqeeyaan Ciidamadda Badda.
Wasiirka ayaa ugu horeyn booqday doomo ay leeyihiin Ciidamadda Badda, kuwaas oo dhawaan la filayo in ay door ka qaadan doonaan sugidda ammaanka xeebaha Soomaaliya.Taliyaha Ciidamada Badda Dowladda Federaalka Admiral Maadey Nuurey Sheekh Ufurow, ayaa warbixin ka siiyey Wasiirka doomaha iyo sida ay u shaqeeyaan, isagoo xusay in ay mar dhow bilaabi doonaan shaqooyinkii loogu talagalay.
1 Jawaab " Wasiirka Difaaca oo kormeer howlleed ku tagey Xarunta Ciidamadda Badda Soomaaliya. "
Thursday, April 23, 2015 at 2:38 am
Soomaaliya hada waxay cagta saartay wadaddii Horumarka. Waa arin loo baahan yahay Qof kasta oo muwaadiin Soomaali ah inuu ku farxo…iney indhiisu qabtaan in Difaacad badda Soomaaliya uu soo noqonaayo.
Waan ugu Hambalyeyneynaa Dowladda federaalka Soomaaliya dadaalka ay ku bixineyso soo celinta Nidaamka iyo kala dambeynta Badweynta Soomaaliya.
Waa in badeenu noqotaa mid ka madax banaan burcad badeed, qeyraadka oo ay dowladdo shisheeeye qaataan iyadoo muwaadinka soomaaliga ah ka baahan yahay. Bal qiyaas inta Dowladood ee ka faa ideystay xaalufinta qeyraadka badda Soomaaliya.
Dunidda waa la is dhaca laakiin ma jirto dal Soomaliya sida badeeda iyo qeyraadkeeda loo xaalufiyey oo kale ah. Waxaa laga faa ideystay ku dhawaad nus qarni oo si aan shirciyeysneen loo xaalufinayay qeyraaddka shacabka Soomaaliyeed. Badiina ay nqotey meel bahalo galeen ah oo lagu shubo sunta iyo haraadigga Nukliyar ay dowladaha ku horumaray warshadaha ay kala soo carareen dalkooda iyo dadkooda iney wax yeeleeyaan.
Sanadkaan Alle ha ka dhigo kii u horseedi laha shacabka soomaaliyeed iney noqdaan dad isku duuban oo ilaashadda qeyraaadkooda.
aad baan ugu farxi lahayn inaan aragno Sanadkaan Ciidamadda badda Soomaaliya oo si habsami ah u shaqeynaayo. Ilaalinayana Xeebaha wadanka Soomaaliya oo dhan. Waa waajib qofkasta ah oo soomaali ah saaran inuu ka qeyb qaato wuxii karaankiisa ah ee uu awoodi sidii lagu soo celin laha isku dubaridka Ciidamadda Difaaca Badda Somaliya.